शनिबार, ३२ साउन
अक्षरहरु आन्दोलीत छन् ३२ साउन २०७६
‘पहिचानको लेखनमा भाँती पुगेको छैन’ जब पहिचानको मुद्दा बोक्ने र आन्दोलन गर्ने दल सत्तामा पुगे तब पहिचानको मुद्दा सेलायो । लेखक, साहित्यकारहरु सरकारले पहिचानको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्छ ? भनेर हेरिरहेका छौँ । यसर्थ लेखनको हकमा पहिचानको लेखन सुस्ताएको वा सेलाएको छैन । ३२ साउन २०७६
‘क्यामेरा क्रेजी’ धुजुको संघर्षपूर्ण फोटोग्राफी खिचेको फोटो देख्न पाइने हो कि होइन ? पत्तो हुँदैनथ्यो । महिनौ कुरेपछि क्यामेरावालाले ल्याबमा लगेर फोटो धुलाएर ल्याउँदा रहेछन् । फोटो हेर्दा अचम्म लाग्थ्यो । फोटो छोयो भने ‘औंलाको चक्र बस्छ’ भनिन्थ्यो । छुन दिइँदैनथ्यो । ३२ साउन २०७६
तस्बिर फोटोमाथिका जिज्ञासा समाधान गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो, ऊ फोटो बनाउने कारखानाको विज्ञापन गरिरहिछ । साठीको दशकपछि आज अनायासै उसको मनले ती दुई तस्बिर विश्लेषण गर्न थाल्यो । ३२ साउन २०७६
गजल ३२ साउन २०७६
जब शिव सरको हत्या भयो ३२ साउन २०७६
कमरेड, मेरी ठूलीआमाको आत्माले नपिरोस् ! प्रचण्ड कमरेड, ‘मेरी ठूलीआमा पनि मकै मिस्दा घुन पिसिए जस्तै हो ? हाम्री ठुलीआमा सामन्ती हो ? के यो मानवअधिकारको उल्लंघन होइन ?’ ३२ साउन २०७६
दार्चुला खोज्ने डोट्याल्ली कविता दार्चुला जिल्लामै पनि भाषाको फरक फरक रुपलाई दुँवाल्या बोली, मार्माली, लेकमाल बोली भन्ने चलन छ । व्यासमा भने व्याँसी भाषा बोलिन्छ । लेकम, दुहुँ, मार्मामा बोलिने भाषाको साररुप उस्तै भए पनि लवज र कतिपय शब्दहरु पनि निकै फरक छन् । कालीपारी भारतीय भू–भागमा बाेलिने कुमाउनी भषाकाे केहि रूप दाचुर्लामा बाेलिने भषासँग मिल्छ ३२ साउन २०७६
विश्लेषक सुरेन्द्र केसीको नजरः रेखा कामुक, सञ्चिता बुहारी जस्ती ! सिनेमाबाट कोही टाढा हुँदैन । कुनै न कुनै कोणबाट मान्छेको मन सिनेमासँग जोडिएको हुन्छ । ३२ साउन २०७६